လာမယ့်နှစ်မှာလုပ်မယ့်ပွဲတွေ မီချင်မှမီတော့မှာပါလို့ဆိုလာတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးဦးစိန်ရိုး
16 Feb 2018 . 6:07 PM
စိန်ရိုးမင်္ဂလာ-ရွှေလိပ်ပြာဆိုတဲ့ အငြိမ်နဲ့စပြီး အောင်မြင်ခဲ့ရာမှ အခုဆိုရင် အနုပညာသက်တမ်းနှစ်၅၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ဆိုင်း၊အငြိမ့်၊ဇာတ်၊အော်ပရာဇာတ်၊ အသံသွင်းခေတ်၊ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုခေတ်ထိကို အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဆေးစက်ကျရာအရုပ်ထင်တဲ့သူကတော့ ၀ါရင့်လူရွှင်တော်ကြီး ဦးစိန်ရိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် အခုချိန်မှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားလိုက်ပြီဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ အနုပညာစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိလိုသမျှကိုမေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
“အဘ အခုချိန်ထိ အနုပညာပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်က လွှမ်းမိုးထားမှုရှိနေတုန်းပါပဲ။ အိမ်မှာသာလူကရှိနေရပေမယ့် ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘာပွဲတွေရှိတာ ဘယ်သူတွေကတာအစကို မှတ်မိနေတာ။ လာမယ့်နှစ်တော့ လုပ်မယ့်ပွဲတွေမီချင်မှမီတော့မှာပါလေ” လို့ ရင်ဖွင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်အတွက်စကားလက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုပြီး ဦးစိန်ရိုးက အခုလိုထပ်မံပြောပြပါသေးတယ်။
“အခုဆို အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်ပြီလေ။ အခုချိန်ထိ အဘကိုတွေ့ကြရလို့အားလုံးလည်းဝမ်းသာနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြည်သူချစ်တဲ့ လူရွှင်တော်တစ်ယောက်ဆိုတော့ အားလုံးက သတိတရနဲ့ လာမေးကြပါတယ်။မေးကြပေမယ့် စိတ်မကောင်းတာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ မနေ့က လာမေးတဲ့သူဆိုရင် ခြေထောက်အတုကြီးနဲ့လာမေးတာ။ သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ အခုချိန်မှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေပြန်လုပ်ဖို့ စိတ်မကူးတော့ဘူး။ ဘုရားရှိခိုး ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးများများလုပ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးတော့ သေဖို့များသွားပြီလေ။ အားလုံးကို သံယောဇဉ်ရှိပါတယ်။ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ အဘအသက်ရှည်သလို ပရိသတ်အားလုံး အသက်ရှည်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
လာမယျ့နှဈမှာလုပျမယျ့ပှဲတှေ မီခငျြမှမီတော့မှာပါလို့ဆိုလာတဲ့ လူရှငျတျောကွီးဦးစိနျရိုး
စိနျရိုးမင်ျဂလာ-ရှလေိပျပွာဆိုတဲ့ အငွိမျနဲ့စပွီး အောငျမွငျခဲ့ရာမှ အခုဆိုရငျ အနုပညာသကျတမျးနှဈ၅၀ ကြျောရှိပွီဖွဈပွီး ဆိုငျး၊အငွိမျ့၊ဇာတျ၊အျောပရာဇာတျ၊ အသံသှငျးခတျေ၊ ရုပျရှငျဗီဒီယိုခတျေထိကို အနုပညာနဲ့ပတျသကျလာရငျ ဆေးစကျကရြာအရုပျထငျတဲ့သူကတော့ ဝါရငျ့လူရှငျတျောကွီး ဦးစိနျရိုးပဲဖွဈပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ အခုခြိနျမှာ အနုပညာအလုပျတှကေို ရပျနားလိုကျပွီဖွဈလို့ သူ့ရဲ့အနုပညာစိတျခံစားခကျြနဲ့ပတျသကျပွီး သိလိုသမြှကိုမေးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
“အဘ အခုခြိနျထိ အနုပညာပျေါမှာထားတဲ့စိတျက လှမျးမိုးထားမှုရှိနတေုနျးပါပဲ။ အိမျမှာသာလူကရှိနရေပမေယျ့ ဘယျနဘေ့ယျရကျမှာဘာပှဲတှရှေိတာ ဘယျသူတှကေတာအစကို မှတျမိနတော။ လာမယျ့နှဈတော့ လုပျမယျ့ပှဲတှမေီခငျြမှမီတော့မှာပါလေ” လို့ ရငျဖှငျ့ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျအတှကျစကားလကျဆောငျပေးခငျြပါတယျဆိုပွီး ဦးစိနျရိုးက အခုလိုထပျမံပွောပွပါသေးတယျ။
“အခုဆို အသကျရှဈဆယျကြျောပွီလေ။ အခုခြိနျထိ အဘကိုတှကွေ့ရလို့ အားလုံးလညျးဝမျးသာနကွေမယျထငျပါတယျ။ ပွညျသူခဈြတဲ့ လူရှငျတျောတဈယောကျဆိုတော့ အားလုံးက သတိတရနဲ့လာမေးကွပါတယျ။မေးကွပမေယျ့ စိတျမကောငျးတာလေးတဈခုတော့ရှိတယျ။ မနကေ့ လာမေးတဲ့သူဆိုရငျ ခွထေောကျအတုကွီးနဲ့လာမေးတာ။ သူ့ကိုကွညျ့ပွီးတော့ ကိုယျကစိတျမကောငျးဖွဈနတော။ အခုခြိနျမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှပွေနျလုပျဖို့စိတျမကူးတော့ဘူး။ ဘုရားရှိခိုး ကုသိုလျကောငျးမှုလေးမြားမြားလုပျပါတယျ။ အသကျကွီးတော့ သဖေို့မြားသှားပွီလေ။ အားလုံးကို သံယောဇဉျရှိပါတယျ။ကြေးဇူးလညျးတငျပါတယျ။ အဘအသကျရှညျသလို ပရိသတျအားလုံး အသကျရှညျကွပါစလေို့ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျ” ဆိုပွီး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
by Naw Hsel Hte . 8 months ago